Daawo Sawirrada: Taliyaha ciidanka XDS oo Abu Dhabi kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada UAE – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: Taliyaha ciidanka XDS oo Abu Dhabi kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada UAE
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Jeneraal. Maxamed Adem Axmed oo booqasho rasmi ah ku jooga wadanka Imaaraadka Carabta ayaa kula kulmay Magaalada Abu Dhabi Saraakiil sare oo ka tirsan dalkaasi.
Taliyaha iyo saraakiishaasi waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada Dal, gaar ahaan taageeradooda ku aaddan dhismaha Ciidamadda Soomaaliya, iyadoo Dawladda Imaaraatka Carabtu ay kaalin mug leh ka qaadato dhismaha Ciidamada qalabka sida.
Booqashada uu taliyihi ku joogo dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa qeyb ka ah dadaallada uu talisku ugu jiro dib u dhiska iyo tayeeynta ciidanka XDS si ay u hantaan gacan ku heynta guud ahaan dalkeenna Soomaaliya.
Bas u shaqeeynaya ciyaaraha Olombikada ee Rio de-Janeiro. oo xalay la xabadeeyay